नेपालका शतकधारी क्रिकेटर सुवास किन टाढिए क्रिकेटबाट, पीएम कप पनि नखेल्ने | | Neplays.com
नेपालका शतकधारी क्रिकेटर सुवास किन टाढिए क्रिकेटबाट, पीएम कप पनि नखेल्ने
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर ब्याट्सम्यान तथा विकेटकिपर सुवास खकुरेल पछिल्लो पटक क्रिकेटबाट अलि टाढा रहेका छन । पछिल्लो पटक लर्डसमा भएको नेदरल्याण्ड्स र एमसीसी विरुद्धको सिरीज र नेदरल्याण्ड्स विरुद्धको एकदिवसिय सिरीजका लागि टिममा अटाएका सुवास त्यसपछि फेरी टिम बाहिर रहदै आएका छन । उनी घरेलु प्रतियोगितामा पनि खासै देखिएका छैनन् र तत्काल क्रिकेटमा फर्किने मुडमा पनि छैनन् सुवास खकुरेल ।
नेदरल्याण्ड्स टुरपछि क्रिकेट खेल्ने इच्छा हुँदाहुँदैपनि चोटका कारण बाहिर रहेका सुवास अहिलेपनि पुर्ण रुपमा ठिक भएका छैनन् । बाइकबाट लड्दा हातमा चोट बोकेका सुवासले एक बर्ष अगाडी भएको प्रधानमन्त्री कपबाट उत्कृष्ट कमब्याक गरेका थिए । उनले सो प्रतियोगितामा सतक नै प्रहार गर्दै आफु अझैपनि फर्ममा रहेको प्रमाणित गरेका थिए । जसका कारण उनी राष्ट्रिय टिममा सो बेला तीन बर्षपछि कमब्याक गर्न सफल भएका थिए ।
यसपटक जेठ एक गतेबाट फेरी प्रधानमन्त्री कपको तेस्रो संस्करणको आयोजना हुँदैछ । तर यो प्रतियोगितामा सुवास नखेल्ने भएका छन । उनको हातको चोट विचमा फेरी बल्झिएपछि आराममा छन भने त्यसमाथि उनी पारिवारीक ब्यवसायमा ब्यस्त बनेका छन । सुवासले नेप्लेजसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री कपका बेला आफ्नो अरुपनि ब्यवसायीक र पारीवारीक काम भएकाले खेल्न नपाउने बताए । साथै उनले अब क्रिकेटमा पोखरा प्रिमियर लिगबाट फर्किने बताए ।
सुवासले विचमा प्रशिक्षण पनि नगरेको र एकैपटक खेलमा उत्रदा कठिन हुने भएकाले ५–६ महिनाको समय राखेर क्रिकेटमा फर्किने सोच बनाएको बताए । नेपाली राष्ट्रिय टिममा सुवास बाहिर भएपछि ओपनरमा बारम्बार परिक्षण गरिदै आएको छ । तर कुनै पनि जोडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय टिमसम्मकाे यात्रा
अम्बाती रायडूले सन्यास फिर्ता लिने!
जसप्रित बुमराहले ५० विकेटको रेकर्ड बनाउँदा कसलाई पछि पारे?
न्यूजिल्याण्डविरुद्धको टी–२० का लागि श्रीलंका टिममा को को परे?